Websaydhka Xiriirka Bulshada ee Wal-Mart ayaa fashilmay. $ 50 ilaa kaftanka ugu fiican! | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 4, 2006 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Xitaa ma aanan ogeyn inay isku dayayaan! Wal-Mart guuldareystay markii la dhisayay shabakad xiriir Bulsho oo loogu talagalay Kool Kidz.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka dhigo tan mid furan maxaa yeelay kaftan fara badan ayaa halkan jooga. Ka warran tan? Kaftankii ugu fiicnaa ee ku saabsan sababta ay shabakadda xiriirka bulshada ee Wal-Mart u fashilantay (iyo laga yaabee inay uga sii gudubto internet-ka guud ahaan) ayaa $ 50 lagu shubaa koontadooda Paypal. Waxaan ku istaagi doonnaa 101 kaftan ah qof walbana waxaa loo oggol yahay inuu hal kaftan geliyo. Ma soo dhejin doono wax kaftan ah oo meel ka dhac ah (illaa ay si fudud u weeraraan Wal-Mart mooyee).
Aniga marka hore:
1. Sababtoo ah ma aysan sasabi karin wax $ 6.00 / hr horumariyayaal ah inay ka shaqeeyaan.
Oktoobar 4, 2006 at 4:06 PM
Waa nooc adag oo suuq geyn lagu sameeyo kool kidz markay dhammaantood ku jiraan suuqa.
Oktoobar 4, 2006 at 4:54 PM
Thanks to typo, Wal-Mart's email garoonka ayaa ka baryay dhammaan boggaga A-list “bogaadin HELL” halkii laga siin lahaa “CAAWIMAAD xayeysiin ah!”
Oktoobar 4, 2006 at 6:16 PM
3. Sababtoo ah.
Oktoobar 4, 2006 at 8:50 PM
Walmart Greeter / Maamulaha 82 jirka ayaa hurdo la '.
Oktoobar 4, 2006 at 9:21 PM
Sababtoo ah Wal-Mart waa mid aad u weyn oo aan lagu dhejin karin taxanaha tuubooyinka.
Oktoobar 4, 2006 at 11:07 PM
“Waxay umuuqataa in Niyadsamidu ay soo iibsatay dhamaan xirfadlayaashii shabakada ee aagaas: taasoo keentay in mashruucii isku xidhka bulshada uu gabi ahaanba istaago. Warka wanaagsani, sida had iyo jeer, ayaa ah in 'Maalintii Toddobaadka Dharka' aan iska leenahay 'ay sii ahaatay wax soo saarkeenna ugu sarreeya 10 sano oo xiriir ah consecutive ”- Walton
Oktoobar 5, 2006 at 12:10 PM
Oops, ra'yi dhiibashadaydii waa la jaray. (Honey, waxay yareeyeen bloggeyga).
3. Sababtoo ah shirkad lacagteeda ku sameysa iyadoo dumineysa bulshooyinka, runti ma filan karto inay lacag ka hesho dhismaha bulshada.